Broken Hip (တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်း) - Hello Sayarwon
Broken Hip (တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Broken Hip (တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်း)
Broken Hip (တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်း) ကဘာလဲ။
တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်းဆိုသည်မှာ ပေါင်ရိုး၏ အပေါ်ပိုင်း ကျိုးပြတ်သွားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကျိုးသည့် ပမာဏသည် သက်ရောက်သော အားပေးမူတည်သည်။ တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်းကို ကုသသည့် ခွဲစိတ်ကုသမှုမျိုးသည် ကျိုးပြတ်မှုတွင် ပါဝင်သော အရိုးနှင့် ကြွက်သားများအပေါ် နှင့်/သို့မဟုတ် ကျိုးပြတ်မှုဖြစ်သည့် အတိုင်းအတာပေါ်မူတည်သည်။
Broken Hip (တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ။
တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်းသည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် တစ်နှစ်လျှင် ပျမ်းမျှ ၃၄၁,၀၀၀ ယောက် ဖြစ်ပွားသည်။ တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်း ဖြစ်ပွားနှုန်းသည် အသက်နှင့် လိုက်၍ မြင့်သည်။ အသက် ၆၀ ကျော်တွင် ၅နှစ် မှ ၆ နှစ်လျှင် ၂ဆ တိုးသည်။
Broken Hip (တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
-လဲကျပြီးပြီးချင်း လှုပ်ရှား၍ မရခြင်း။
-တင်ပါး (သို့) ပေါင်ခြံနေရာတွင် ပြင်းထန်စွာ နာကျင်ခြင်း။
-ထိခိုက်သော တင်ပါးဖက်၏ ခြေထောက်သည် အားစိုက်၍ မရခြင်း။
-တင်ပါး နှင့် တင်ပါးအနီးတဝိုက်တွင် တောင့်တင်းခြင်း၊ အညိုအမဲစွဲခြင်း နှင့် ရောင်ရမ်းခြင်း။
-ထိခိုက်မိသောဖက်၏ ခြေထောက်သည် တိုသွားခြင်း။
-ထိခိုက်မိသောဖက်၏ ခြေထောက်သည် အပြင်ဖက်သို့ ကားထွက်နေခြင်း။
အထက်ပါ လက္ခဏာများသည် လဲကျပြီးလျှင် အဖြစ်များဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အရိုးပွရောဂါ ခံစားရပြီး အရိုးပါးနေလျှင် တင်ပရုံရိုးသည် လဲမကျပဲနှင့် ကျိုးသွားတတ်သည်။
အထက်ပါ ရောဂါလက္ခဏာဝေဒနာများ ခံစားနေရလျှင် (သို့) ထိုလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သိလိုလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
အထက်ပါ လက္ခဏာများမှ တခုခုရှိနေလျှင် ဆေးကုသမှုခံယူရန်အတွက် ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ပါ။
လူနာတင်ယာဉ် ခေါ်ပါ။ လူနာတင်ယာဉ်စောင့်နေစဉ် လူနာကို နွေးနွေးထွေးထွေးထားပါ။ ဒီထက် သိလိုသသည်များရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
Broken Hip (တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ။
ပြင်းထန်သော ထိခိုက်မှု- ဥပမာ။ မော်တော်ကားတိုက်မှုသည် အငက်ရွယ်အားလုံးကို တင်ပဆုံကျိုးမှု ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အသက်ကြီးသောလူများတွင် လဲကျခြင်းကြောင့် ပိုပြီး အဖြစ်များသည်။ အရိုးအားနည်းစေသည့် ရောဂါရှိသည့် လူများတွင် သာမန် မတ်တပ်ရပ်ခြင်း နှင့် လှည့်လိုက်ခြင်းကပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Broken Hip (တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်းဖြစ်ပွားနှုန်းသည် အသက်ကြီးသည်နှင့် အမျှ ပိုများလာသည်။ အဘယ်ကြောင်ဆိုသော့်
-အရိုးသိပ်သည်းဆ နှင့် ကြွက်သားထု အားအင်လျော့နည်းလာခြင်း။
-လဲကျစေနိုင်လွယ်သည့် အမြင်အာရုံအားနည်းလာခြင်း နှင့် ဟန်ချက်ထိန်းရာတွင် အခက်အခဲများရှိနေခြင်း။
ထို့အပြင် တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်းကို ပိုဖြစ်စေနိုင်သည့် အချက်အလက်များစွာတွင်
-ခန္ဓါကိုယ် ပိန်လွန်းခြင်း နှင့် အရပ်ရှည်လွန်းခြင်း၊ မိသားစုဝင်များတွင် ထိုသို့သော လက္ခဏာများရှိခြင်း။
-အရိုးသန်မာရေးအတွက် လုံလောက်သော ကယ်လ်စီယန် နျင့် ဗီတာမင် ဒီ မရှိခြင်း။
-လှုပ်လှုပ်ရှားရှား မရှိခြင်း၊ အရိုးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခြင်း။ ဥပမာ- လမ်းလျှောက်ခြင်း။
-ခန္ဓါကိုယ် ပုံမှန် လှုပ်ရှားမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ကျန်းမာရေး အခြေအနေများရှိနေခြင်း။ ဥပမာ- မူးဝေတတ်ခြင်း၊ ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်ခြင်း၊ အရိုးအဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်း။
-ဆွဲသောက်ရသော အချို့သောက်ဆေးများ။ ဥပမာ- ရင်ကျပ်ရောဂါ နှင့် နာတာရှည် လေပြွန်ပိတ်ရောဂါအတွက် စတီးရွိုက်ဆေးများသောက်ရခြင်း။
Broken Hip (တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်းကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်သည်။
ဓါတ်မှန်တွင် တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်းကို မတွေ့နိုင်လျှင် အခြားသော စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်သည်။ ဥပမာ-
-(MRI) သံလိုက်စက်ကွင်းသုံး၍ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း။ (အရိုး နှင့် ကြွက်သား တို့၏ အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပုံရိပ်များ ရနိုင်)
-ကွန်ပြူတာ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း။ ပိုမိုတိကျသော ပုံရိပ်များ ရရှိနိုင်။
-အရိုးစကင်ဖတ်ခြင်း။ အရိုးတွင်းသို့ ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းထိုးသွင်းပြီး စကင်ဖတ်ခြင်းဖြင့် အရိုးကျိုးသည့် လိုင်းကို သိရှိနိုင်ခြင်း။(ကျိုးနေသည့် အရိုးအစိတ်အပိုင်းများ ပုံမှန်နေသားတကျ ရှိနေသည့် အခြေအနေများနှင့် သင့်တော်)
Broken Hip (တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်းကို သိပြီးပြီးချင်း ၂၄ နာရီအတွင်း ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကို အမြန်ဆုံးပြုလုပ်သည်။
ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဖြင့် ဆေးရုံတွင် နေရသည့် နေ့ရက်များ နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများကို လျော့ကျစေသည်။
တခါတရံ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကို အရင်ဦးစွာ ကုသဖို့လိုသည့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကြောင့် ၁ ရက် (သို့) ၂ ရက် နှောင့်နှေးထားတတ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ခွဲစိတ်ခြင်းကို အန္တရာယ်ကင်းစေသည်။
ပြုလုပ်ရမည့် ခွဲစိတ်ကုသမှုအမျိုးအစားသည် ကျိုးပြတ်မှုအတိုင်းအတာ နှင့် နေရာပေါ်မူတည်သည်။
တင်ပဆုံရိုးပြင်ဆင်သည့် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း : ဒီခွဲစိတ်မှုသည် အရိုးများ ကောင်းမွန်စွာ တည့်မတ်နိုင်လျှင် ပို၍ ရွေးချယ်သည်။
တင်ပဆုံရိုးအစားထိုး ခွဲစိတ်ကုသခြင်း : ဒီခွဲစိတ်မှုကို အရိုးများကောင်မွန်စွာ မတည့်မတ်နိုင်တော့လျှင် ပြုလုပ်သည်။
တိကျသေချာစွာ စစ်ဆေးစမ်းသပ်ပြီးလျှင် သင့်တော်သော ကုသထုံးကို ဆရာဝန် အကူအညီဖြင့် ရွေးချယ်စေသည်။
ခွဲစိတ်ကုသပြီးလျှင် ဘာတွေကို ဂရုစိုက်သင့်လဲ?
တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်းမှ သက်သာလာစေရန် အချိန် နှင့် စိတ်ရှည်ရန်လိုအပ်သည်။ ခွဲစိတ်ပြီးလျှင် ဟင်းချက်ခြင်း၊ အဝတ်အစားဝတ်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲ ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် လူနာအနေနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်သည့် နေရာ (သို့) ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးစင်တာ တို့တွင် အချိန်တစ်ခုကြာ နေသင့်သည်။
ဆရာဝန်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး နှင့် အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး တို့ပါဝင်သော ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးအစီအစဉ်များကို ပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းပေးမည်။
ဘာလို့ တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်းက အသက်အန္တရာယ်ရှိတာလဲ?
တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်းသည် ရှေ့လျှောက်တွင် အမှီအခိုကင်းစွာ နေထိုင်မှု နှင့် ဘဝသက်တမ်းကိုပင် တိုနိုင်စေသည်။
တင်ပဆုံရိုးကျိုးခဲ့ဖူးသည် လူများမှ တစ်ဝက်ခန့်သည် အမှိအခိုကင်းစွာ မနေနိုင်ကျတော့ပေ။
အကယ်၍ တင်ပဆုံရိုးကျိုးခြင်းသည် လူနာကို အိပ်ရာပေါ် အချိန်ကြာမြင့်စွာ မလှုပ်မယှက်ရှိနေစေလျှင် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများအနေနှင့်
ခြေထောက် နှင့် အဆုတ်ရှိ သွေးကြောများတွင် သွေးခဲစေနိုင်ခြင်း။
ကြွက်သားထု အင်အားဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်း၊ ချော်လဲနိုင်ခြင်း နှင့် ဒဏ်ရာရလွယ်နိုင်ခြင်း။
ထို့အပြင် တင်ပဆုံရိုးကျိုးခဲ့သည့်လူနာများသည် အရိုးအားနည်းခြင်း နှင့် နောက်ထပ်တင်ပဆုံရိုးကျိုးနိုင် များသည်။
အရွယ်စရောက်ခါစတွင် ကျန်းမာစွာ နေထိုင်ခြင်းသည် အရိုးကို သန်မာစေပြီး နောင်တွင် အရိုးပွရောဂါဖြစ်ခြင်းကို လျော့နည်းစေသည်။ ထို့အတူ အသက်အရွယ်တိုင်းတွင် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်နေစေမည် ဖြစ်သည်။
ချော်လဲခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် နှင့် အရိုးကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိန်းရန်
-ကယ်လ်စီယမ် နှင့် ဗီတာမင် ဒီ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်။
ပုံမှန်အားဖြင့် အသက် ၅၀ နှင့် အထက် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များသည် ကယ်လ်စီယမ် ကို တစ်နေ့လျှင် ၁,၂၀၀ မီလီဂရမ် နှင့် ဗီတာမင် ဒီ ၆၀၀ International Unit ရရှိသင့်သည်။
-အရိုးသန်မာရေး နှင့် ဟန်ချက်ထိန်းနိုင်ရန်အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများ။ ဥပမာ : လမ်းလျှောက်ခြင်း။
လေ့ကျင့်ခန်းများသည် ခန္ဓါကိုယ်စွမ်းအားကို တိုးမြင့်ပေးနိုင်သည်။ အသက်ကြီးလာသည်နှင့် အမျှ ဟန်ချက်ထျန်းနိုင်စွမ်းသည် လျော့နည်းလာသောကြောင့် ဟန်ချက်ထိန်းပေးနိုင်သော လေ့ကျင့်ခန်းများသည် ချော်လဲကျနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။
-ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်း (သို့) အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်း။ ဆေးရွက်ကြီး နှင့် အရက်သည် အရိုးသိပ်သည်းဆကို လျော့နည်းစေသည်။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းသည် ဟန်ချက်ပျက်စေတတ်ပြီး ချော်လဲစေနိုင်သည်။
-အိမ်ရှိ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော အရာများကို ဆန်းစစ်ခြင်း။ ချော်လဲစေနိုင်သော ကော်ဇောများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ လျှပ်စစ်ကြိုးများကို နံရံတွင် တွယ်ထားခြင်း၊ အပိုပရိဘောဂများ နှင့် ချော်လဲစေနိုင်သည့် စသည့်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားထားခြင်း။
အခန်းများ နှင့် လျှောက်လမ်းကို ကောင်းမွန်စွာ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။
-မျက်လုံးကို စစ်ဆေးခြင်း။ တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် မျက်စိစစ်ဆေးခြင်း (သို့) သွေးချို၊ ဆီးချို ရှိလျှင် ပိုမိုစစ်ဆေးခြင်း။
ကျန်းမာရေးခံယူကုသမှုများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း။ -အားနည်းနေခြင်း၊ မူးဝေခြင်း စသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် ချော်လဲနိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ နှင့် ပတ်သတ်၍ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
-ထိုင်ရာမှ ထလျှင် ဖြေးဖြေးထခြင်း။ ရုတ်တရက် အမြန်ထလိုက်လျှင် သွေးဖိအား ရုတ်တရက်ကျသွားတတ်ပြီး ချာချာလည်မူးပြီး လဲကျသွားတတ်သည်။
-လမ်းလျှောက်လို့ အဆင်မပြေသည့်အခါ ဆရာဝန် (သို့) အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးနည်းပညာရှင်နှင့် တိုင်ကင်ဆွေးနွေးပြီး ကူညီပေးနိုင်မည့် လမ်းလျှောက်တုတ် (သို့) လမ်းလျှောက်အကူအညီ အသုံးပြုစေခြင်း။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 7, 2018
1. Hip fracture: topic overview.
Accessed June 04, 2014.
2. Hip fracture.
Accessed March 11, 2015
3. Hip Fracture Repair (Hip Pinning).
Accessed June 4, 2014
4. Hip fracture in emergency medicine.
Accessed February 28, 2016.